Ama-movie ongawabona ngaphambi kokuya eParis ukuze wazi idolobha kangcono | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | 09/06/2021 11:49 | Cultura, EParis
Uma uzibuza ngama-movie ongawabona ngaphambi kokuya eParis, kungenxa yokuthi uhlela uhambo lwenhlokodolobha yaseFrance. Ngeke uzisole ngocingo Idolobha Lokukhanya Ingenye yezinhle kakhulu emhlabeni. Igcwele izikhumbuzo nezindaba ezidumile ezizokuthakazelisa, kepha futhi idolobha lesimanje elinakho konke okudingayo ukuze uhlale ongenakulibaleka.
Noma kunjalo, ama-movie ongawabona ngaphambi kokuya eParis ukuthi sizocaphuna uzokunikeza umbono ohlukile wedolobha laseSeine. Ngabo, ungayihlola ngaphambi kokuhamba ekhaya bese uthola amakhona, mhlawumbe, obungazi nokuthi akhona. Kepha lesi akusona isikhathi sokunweba, ngaphandle kokuchitha isikhathi, sizophakamisa ukuthi ama-movie azowabona ngaphambi kokuya eParis.
1 Ama-movie ongawabona ngaphambi kokuya eParis, uhambo olubonakalayo lwedolobha
1.1 IHunchback yeNotre Dame
1.2 UMarie Antoinette, enye ifilimu ongayibona ngaphambi kokuya eParis ukuyofunda ngomlando wayo
1.5 U-Amelie, wakudala phakathi kwama-movie ongawabona ngaphambi kokuya eParis
1.7 URatatouille, umnikelo wokugqwayiza kumabhayisikobho ongawabona ngaphambi kokuya eParis
Ama-movie ongawabona ngaphambi kokuya eParis, uhambo olubonakalayo lwedolobha
Uhambo lwethu lwamafilimu amahle kakhulu asethwe eParis luzokuyisa ezikhathini ezedlule lapho uzokwazi khona umlando wazo, kepha futhi kuze kube manje, ukuze uthole ukuthi ziyini lezo zindawo zigcwele intelezi lokho akuveli kumhlahlandlela wabavakashi. Asihambe namateyipu esiwaphakamisayo.
IHunchback yeNotre Dame
I-Notre Dame Cathedral
Kususelwa kunoveli engavamile UMama wethu waseParis wabakhulu Víctor Hugo, kune-movie engaphezu kweyodwa kuneziningana. Mhlawumbe okuthandwa kakhulu inguqulo ye-animated eyenziwe yiDisney ngo-1996. Kusibuyisela ezikhathini zasendulo ukuxoxa indaba ye-hunchback Quasimodo ne-gypsy enhle u-Esmeralda, ababambe iqhaza kutulo lothando, intukuthelo nokuziphindiselela.
Konke lokhu neNotre Dame, isonto elifanekisela kakhulu eParis, njengesigaba esiphakathi. Ngamafuphi, indaba enhle engenazo izinhlamvu ezimbi elethwe esikrinini esikhulu kaningi.
Uma ukhetha ukubona inguqulo enabalingisi bangempela, ngokwesibonelo unesimungulu UMama wethu waseParis, kusuka ngo-1923 futhi kwaqondiswa nguWallace Worsley. Abahumushi bakhe babenjalo Lon chaney njengoQuasimodo noPatsy Ruth Miller njengo-Esmeralda. Kodwa-ke, uma ufuna uhlobo lomsindo, sincoma ifilimu yesihloko esifanayo esatholwa ngo-1956 nge U-Anthony Quinn endimeni ye-hunchback noGina Lollobrigida njengo-Esmeralda. Kulokhu, ukuqondiswa kwakunguFrench Jean Delannoy.
UMarie Antoinette, enye i-movie ongayibona ngaphambi kokuya eParis ukuyofunda umlando wayo
Indaba yowesifazane ogile kanzima ka ULouis XVI waseFrance ibuye yalethwa esikrinini esikhulu kaningi. Siphakamisa wena inguqulo eqondiswe ngo-2006 nguSofía Coppola ngokunembile ngesihloko esithi UMarie Antoinette. Yize igxile empilweni yendlovukazi, futhi iyindlela enhle kakhulu ye- Yazi iParis eguqukayo yangekhulu le-XNUMX, izikhumbuzo zazo eziningi ezisamile namanje futhi uzokwazi ukuzibona ohambweni lwakho lokuya edolobheni.
Indima yesicukuthwane esingalindelekile idlalwa ngu UKristen dunst, ngenkathi eyomyeni wakhe, inkosi, ephethe uJason Schwartzman. Ezinye izibalo ezifana noJudy Davis, Rip Torn noma i-Asia Argento ziqedela ukulingiswa kwefilimu ethole i- Oscar ngomklamo omuhle kakhulu wezimpahla.
Kodwa-ke, uma ukhetha ifilimu yakudala, sincoma eyodwa evela ku-1939, nayo enesihloko UMarie Antoinette. Iqondiswe nguWoodbridge S. Van Dyke, owine ama-Oscars amabili we Isidlo sakusihlwa sikamsolwa y i-San Francisco. Ngokuqondene notolika, Norma Shearer wadlala indlovukazi, kwathi uRobert Morley wadlala indawo kaLouis XVI kwathi uTyrone Power wadlala indawo ka-Axel von Fersen, owayecatshangelwa ukuthi uyisithandwa seNkosi.
Iphosta ye-'Les Misérables '
Futhi kususelwa kunoveli engaziwa ngo Víctor Hugo, omunye wababhali owabamba kahle iParis yesikhathi sakhe, uyiswe kaningi kwifilimu nakuthelevishini. Kwadalelwa nomculo oshisayo ngokususelwa emdlalweni.
Uhlobo esikulethela lona yilo oluqondiswe ngo-1978 nguGlenn Jordan futhi olingisa phambili URichard Jordan endimeni kaJean Valjean, UCaroline langrishe njengoCosette no U-Anthony Perkins njengoJavert. Esikhathini sefilimu sibona iziqephu zomlando waseParis ezifana ne- Inguquko ka-1830 futhi, ngokuvamile, empilweni yansuku zonke edolobheni laseSeine yangaleso sikhathi.
Kodwa-ke, uma ufuna ukukhetha njenge-movie ukuthi yini ongayibona ngaphambi kokuya eParis ngokususelwa kuyo Abadabukisayo enye inguqulo, ungakhetha leyo eyakhishwa ngo-1958. Kulokhu, umqondisi kwakunguJean-Paul Le Chanois nabahumushi Jean Gabin, UMartine Havet noBernard Blier.
Inketho yesithathu yileya efothelwe ithelevishini njengezinkonzo zikaJosée Dayan. UJean Valjean ubemelwe ngu UGérard Depardieu, ngenkathi uCosette edlalwa ngu Virginie Ledoyen noJavert nguJohn Malkovich.
Uma ama-movie angaphambilini akubonisa iParis eyingqophamlando, Moulin Rouge Iphinde ikwethule kumoya we-bohemian wedolobha ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX. Ngaphezu kwakho konke, lokho kwendawo yobuciko ye- Montmartre, lapho i-cabaret edumile enikeza ifilimu isihloko sayo isemi nanamuhla.
Le filimu yayiqondiswa nguBaz Luhrmann futhi yakhishwa ngo-2001. Ixoxa indaba yombhali osemncane waseNgilandi othuthela edolobheni laseSeine, ehehwa ngokunembile yi-bohemianism yakhe yobuciko. EMoulin Rouge uzohlangana nabantu bangempela njengomdwebi UToulousse Lautrec, kodwa futhi nomdansi uSatine, azothandana naye.
Kuyifilimu yomculo ezokunikeza imininingwane ebalulekile ongayithola indawo yaseMontmartre nokuthi yini okufanele uyibone lapho uya eParis. Kepha futhi sikweluleka ukuthi unake ingoma yayo enamandla, efaka izingoma ezinhle kakhulu Queen, Elton John o Nirvana.
Amelie, okudala phakathi kwama-movie ongawabona ngaphambi kokuya eParis
Ikhofi Elimbili LamaMills
Le filimu, eyakhishwa nango-2001, ingeyakudala phakathi kwezincomo ze-cinematographic ongazibona ngaphambi kokuya eParis. Kungumdlalo wothando oqondiswe nguJean-Pierre Jeunet futhi owenziwa ngu U-Audrey tatoo.
Uzibeka ezicathulweni zikaweta osebenza ku- Ikhofi Elimbili LamaMills nokuthi uthola injongo empilweni yakhe lapho ethatha isinqumo sokusiza abanye babenze bajabule. Le filimu iwine ama-César Awards amane futhi ibiyilungu lama-Oscars amaningana, yize ingatholanga lutho. Kepha ngaphezu kwakho konke, yifilimu ebukekayo ezuze impumelelo enkulu nomphakathi.
Kuphelele futhi ukwazi Montmartre, lapho ikhefi lapho kusebenza khona u-Amelie. Kepha, ngokungafani naleso esedlule, indawo esiyibona kuyo yiyona yamanje. Uma uhambela eParis, ungabuye uphuze eCafé de Los Dos Molinos.
Umculi u-Edith Piaf
Uma iFrance ngokujwayelekile neParis ikakhulukazi benophawu emhlabeni wengoma, kunjalo Edith Piaf, owazalelwa edolobheni laseSeine. Le filimu ilandisa, ngokunembile, ngempilo yomculi kusukela ebuntwaneni bakhe endaweni empofu yedolobha elikhulu kuze kube yilapho umhlaba wakhe unqoba.
Iqondiswe ngu-Olivier Dahan, yaqala ukukhonjiswa ngo-2007. Kepha uma kukhona okugqamile ngakho, kungukusebenza okuhle Marion Cotillard endimeni yomculi. Eqinisweni, wayithola U-Oscar we-Best Actress ngokusebenza kwakhe, ngaphezu kokunye ukubonwa okuningi.
Omjoyine kubalingisi nguGerard Depardieu njengoLouis Leplée, usomabhizinisi womculo owathola uPiaf; UClotilde Courau endimeni kamama womculi noJean-Pierre Martins njengomshayisibhakela uMarcel Cerdan, owayethandana nengoma ethi diva.
Ratatouille, umnikelo wokugqwayiza kumafilimu ongawabona ngaphambi kokuya eParis
Njengoba wazi kahle, iParis ibineminyaka engamashumi eminyaka iyisigameko se- cuisine engcono kakhulu emhlabeni. Lesi yisisekelo sale filimu esiqeda ngaso ukuvakasha kwethu kumafilimu esizowabona ngaphambi kokuya eParis.
URemy uyigundane oza edolobheni laseSeine ukufeza iphupho lakhe lokuba ngumpheki omkhulu. Ukwenza lokhu, kwethulwa kufayela le- Indawo yokudlela kaGusteau, isithombe sakhe esikhulu. Lapho uzosebenzisana nomshini wokuwasha izitsha olula ukwenza isobho eliphumelele kakhulu kuyo yonke iParis. Kuqala kanjalo-ke ukuzidela kwegundane elisebunyeni.
Kuyinto a ifilimu opopayi yakhiqizwa nguPstrong futhi yakhishwa ngo-2007. Yize umqondisi wayo wayezoba nguJan Pinkava, ekugcineni kwaba njalo Brad Bird futhi, ekudubuleni, yayinabalingisi besimo se- UPeter O'Toole nosomahlaya UPatton Oswalt. Futhi, phakathi kweminye imiklomelo eminingi, wayithola Oscar ngefilimu egqwayiza kakhulu. Ekugcineni kuyamangalisa umbono we skyline kusuka eParis lokho kungabonakala kwesinye sezigcawu zakhe.
Sengiphetha, siphakamise ezinye ze- ama-movie ongawabona ngaphambi kokuya eParis ukwazi inhlokodolobha yaseFrance kangcono. Kodwa-ke, abanye abaningi bayanconywa. Ngokwesibonelo, UCharade, no-Audrey Hepburn noCary Grant behambahamba osebeni lwaseSeine; Paris, paris, Abaphikisi babo abangena enkundleni yaseshashalazini edolobheni ukuze balingise umculo wabo, noma Akuthinteki, esikhombisa ukubaluleka kobungani, kepha nosizi lwezindawo ezisebenza nabantu zedolobha elikhulu. Futhi, lapho uhamba, ukuzungeza uMuzi wokuKhanya, ungafunda Lesi sihloko ngezeluleko zethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » EParis » Ama-movie okufanele uwabuke ngaphambi kokuya eParis